अब लाइसेन्स ट्रायलमा सामान्य गल्तीले फेल नहुने ! :: Setopati
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस २८
सवारी चालक अनुमति पत्रको मापदण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेको कडा मापदण्ड परिमार्जन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ।
त्यसपछि 'एप्लिकेन्ट सेभ्ड् सक्सेसफुल्ली' देखिन्छ। त्यहाँ ओकेमा क्लिक गर्ने। र, अन्त्यमा प्रिन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईंको फारम भरिन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, १९:२८:००
नयाँ सुजुकी डिजायर सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य
दुई लाखभन्दा कममै पाइन्छन् हिरो स्कुटर, कुनको मूल्य कति?
विदेशबाट फर्किएकालाई टाटा मोटर्सले विना धितो गाडी दिने